Fifampiarahabana eny Iavoloha : Mbola tsy filoha vaovao no hitarika
02/01/2019 admintriatra 0
Hatreto izany dia mbola tsy ny filoha vaovao no hitarika ny lanonana eny Iavoloha, raha isaina ny tetiandro hamoahana ny voka-pifidianana ofisialy sy ny fepotoam-piasan’ny filoha teo aloha. Raha ny angom-baovao dia efa nisy ny …Tohiny
Hetraketraka politika tany Morondava : Namoy ny ainy ilay mpikatroka tao amin’ny k25
Mbola tsy misy fitsaharana ny sotasota atao amin’ny mpanaraka ny kandidà laharana faha-25. Mpikatroka iray antsoina hoe Said Allaoui indray mantsy no lasibatra vono feno habibiana, tany Morondava, ny 14 desambra lasa teo, ka namoy …Tohiny
Efa manao fanahy iniana mihitsy, ary tsy vitan’ny manao “masobe tsy mahita” ny governemanta tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian, hatramin’ny nipetrahany teo nanomboka ny volana jona 2018. Tsy misy zava-bitan’ity governemantan’i Ntsay Christian ity tao anatin’izay …Tohiny
Hain-trano tany Masomeloka : 190 tafo kila forehitra
Vao manomboka ny taona dia fahamaizana goavana no niseho. Ranomaso, fikorontanana ary alahelo no teny an-tavan’ny mponina nitsenana ny taona vaovao tany amin’ny fokontany Sohihy, kaomina Masomeloka, distrikan’i Mahanoro faritra Atsinanana, omaly maraina. Trano maro …Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Nihaona fanintelony tamin’ ireo mpandraharaha
Nomen’ny Filoham-Pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina lanja manokana ireo mpandraharaha malagasy ny 19 ny volana desambra teo tetsy amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, satria dia nanokana fotoana hiresahana amin’izy ireo ny tenany mikasika ny mety hanatsarana ny tontolon’ny ...Tohiny
Mitandrema! : Tandindomin-doza ny firenena